Fekitori Yemubhedha | China Vagadziri veMibhedha, Vatengi
Yongsheng imba nhema nhema hombe saizi yakakwenenzverwa mubhedha
Zvese zvekuwedzera zvekuchengetera zvaunoshuvira kuti uve nazvo, zvakavanzwa pasi pemubhedha wako. Nouchenjeri kuviga matanhatu akadzika madhirowa anomhanya kureba kwemubhedha, Blair inopa iyo nzvimbo yakaenzana neyeakamuri mupfekeri. Kubatanidza inodziya walnut uye pfuti yekumisikidza, iyo chikuva mubhedha une yakachena mitsara uye maindasitiri musanganiswa wezvinhu.
Yongsheng pamba kanopi mubhedha, nhema, kaviri mubhedha
Mitsetse yakarongedzwa zvine mutsindo ine rakasarudzika bhatani tufting, mapapiro akaenzana akaenzana uye mutsetse wakapetwa wembambo wechipikiri unopa uyu mubhedha wakasimudzwa zvakakwana hupfumi hwazvino kutaridzika kwawanga uchishuvira. Asi runako rweVintasso mambokadzi runako chairwo? Iyo yepamusoro upscale dhizaini inouya pamutengo unoshamisa wakaderera. Chekupedzisira, inotengeka sarudzo kune avo vane inodhura kuravira.
• Inosanganisira headboard, footboard, rails uye slats
• Nhema nhema faux upholstery
• Bhatani-rakabvarurwa, wingback headboard ine nailhead trim accents
• Yakafumurwa tsoka dzehuni
Kutarisa kudzosa pfungwa yepfuura naka? Irote, igare neiyo Nashburg mambokadzi simbi mubhedha. Matte dema furemu ine yakaumbwa "zvakaiswa" zvakajeka zvinoteedzera zvakavezwa-simbi mibhedha kubva nezuro kwekutarisa kwakanakira yako yemapurazi imba yemazuva ano kana kottage-quaint kutiza.
Yongsheng imba yese simbi mubhedha, nhema
Nhanho inosvika padanho repamusoro rechitaera mune yevana yekurara fanicha neiyo Dinsmore mapatya mubhedha mubhedha. Mhinduro inotonhorera kune inoitika mune yazvino maindasitiri dhizaini, ino simbi bunk mubhedha inovhara yakasviba uye grey kupedzisa kwekugamuchirwa kwekubata kwekukura.